Faa'iidooyinkayada - Shenzhen Polymer Battery CO., LTD
Adeegga baytariga OEM & ODM waa la soo dhoweeyay
Iyada oo ku saleysan shuruudaha macaamiisha, kooxda injineeriyada ayaa doortay unugyada, naqshadeeyey BMS, waxay xireen unugyada, waxay sameeyeen baaritaannada. Waxaan ku qancinaa macaamiisheena xalka furayaasha-key.
Baakad batari ah oo la Sameeyay oo ay la socdaan LG / Samsung / Sanyo / Panasonic / cell cell batari. 100% Dammaanad Sax ah.
Fadlan nala soo xiriir annaga oo bilaash ah oo la socda mashaariicda baakidhkaaga.
Gaarsiinta waqtiga Marka aan nahay PLM waxaan fahamsanahay in mid ka mid ah dalabaadka ugu muhiimsan ee macaamiisheena ay tahay in waqtiga la ilaaliyo. Waxaan danaynaynaa horumarka gaarsiintayada illaa iyo tayadeenna.
Tayada ugu fiican: Dammaanad-qaadista badeecado tayo wanaagsan leh ayaa ah mudnaanta ugu weyn. Tani waa sababta aan had iyo jeer u doorto inaan maalgelino xalalka tikniyoolajiyadda sare ee xarunteenna R&D.
Waxyaabaha gaarka ah: Marka lagu daro bangiga awooda ugu khafiifka ah adduunka, PLM waxay bixisaa badeecooyin aad u fiican oo kaladuwan si ay ula jaan qaadaan isbeddelka macaamiisha iyo baahiyaha.
Adeeg macmiil heer sare ah: Mid ka mid ah welwelka soo noqnoqda ee ay macaamiisheennu nala wadaagaan ayaa ah baahida loo qabo khibrad adeeg macmiil oo la isku halleyn karo waxaanna ka taxadarnaa wixii weydiin ah kahor iibinta iyo ka dibba.
Sida soo saaraha xirfadle ah waxaa ku jira 30 injineer oo ku jira kooxda PLM R&D oo ay ku jiraan 5 PHD, 10 MFD iyo 15 Bachelor. Qiyaastii 30 unug wax soo saar otomaatig ah qalabka, 25 nubit Qalabka Semi-otomatiga ah iyo 8 khadadka wax soo saarka ee ku jira annaga warshad.